Odokotela baye bakhulume futhi bazohlale bephikelela ukuthi utshwala lunomonakalo omkhulu ngesikhathi sokudla nokukhulelwa. Futhi labo omama abaqiniseka ukuthi uma uphuza njalo utshwala, akulimazi ingane, udinga ukuthumela ezikoleni zokulungiswa kwezigwegwe kanye nokuvakashela izibhedlela zezingane. Kodwa omama abanjalo ngenhlanhla kancane. Abazali abanokholo bayazigwema noma yini engabeka ingozi empilweni yezingane zabo. Masikhulume ngotshwala nokuncelisa.
Abesifazane abakhulelwe kufanele balandele izincomo zikadokotela wabo, oqondisa ukukhulelwa. Futhi omama abancane ngokuvamile abaceli abachwepheshe, kodwa njengabo noma abanamava. Njengoba wonke umuntu uyazi ukuthi umuthi osemthethweni uthatha isikhundla sini: ukudla noma utshwala. Uma ufunda amanothi ochwepheshe, khona-ke ingilazi yewayini eholidini ilingana nokuphuza ngokweqile. Omama abahle banomuzwa wecala, futhi abesifazane abaphuza utshwala abasizi ngalutho ukuchaza noma yini.
Kulabo besifazane abanezici ze-metabolic, nesisindo somzimba esincane, utshwala buyashesha futhi buncipha kancane kancane . Esikhathini se-mammary gland kuyoba khona u-10% wemali yotshwala egazini. Uma owesifazane ephuza u-0.33 amalitha kabhiya, emva kwemizuzu engamashumi amabili utshwala aluxhunyiwe futhi lungakafiki emathunjini. Uma udla utshwala emva kokuba owesifazane edla isidlo sakade, emva kwemizuzu engu-40 utshwala luzovela egazini. Ngakho-ke, lapho sekuyimaminithi angu-20 ngemva kokulala ingilazi yobhiya ukudlala ingane kuyingozi. Ukuphuza utshwala kakade kusakazeka emzimbeni bese kungena egazini, futhi okungu-10% kokuqukethwe kotshwala egazini kuqukethwe ubisi lomama.
Ukuhlushwa utshwala obisi lwebele akuxhomeke ekutheni ubisi lubonisiwe noma cha. Lapho utshwala egazini likaMama lungahlanjululwa, ukugxila kulokhu kubisiwe. Lokhu kuzokwenzeka ngemuva kokusondla emahoreni angu-2.5. Amahora amathathu emva kokuthatha u-150 ml wewayini noma ingilazi yobhiya, ngeke kube khona utshwala olukhona ebisi lwebele. Uma uthatha izibuko ezimbili zewayini elinamandla, zizoqedwa emzimbeni emva kwamahora angu-6 kuphela. Futhi kusukela emzimbeni womama, olinganiselwa ngaphansi kwama-kilogram ayi-55, unomzimba omncane, bese uphuza utshwala luzobe ludlulile ngisho nangaphezulu.
Ukwenza iglasi leholide liphephile, lo wesifazane kufanele akhumbule :
Cabangela iminyaka yengane. Izingane ezingaphansi kwezinyanga ezintathu zizwela kakhulu utshwala.
Cabanga ngesisindo sakho. Isisindo esingaphezu komuntu, umzimba ngokushesha uzothatha utshwala.
Utshwala obunamandla buningi futhi bunqunywa.
Ngokushesha ngaphambi kokuphuza noma ngemuva, udinga ukondla umntwana.
Kufanele ulungiselele kusengaphambili ubisi oluncane obonisiwe, uma ingane idinga ukuba idliwe kaningi futhi incane kakhulu.
Ukukwazi nge-"ephephile" nsuku zonke noma ngeviki ngalinye kungama-40 ml we-cognac, 150 ml wewayini elomile noma 0.30 amalitha kagesi. Kodwa ungasebenzisi konke ndawonye.
Ingabe ukubeletha kuyahambisana nokuphuza ngokweqile?
Omama abahle baphakathi kwabesifazane abahlukunyezwa ngotshwala. Laba besifazane ngezinye izikhathi bayakwazi ukukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa futhi lapho ukubeletha ukuyeka ukuphuza utshwala. Kunconywa kubo ukuthi bangathathi igramu eyodwa yobutshwala. Uma basebenzisa amaconsi ase-homeopathic "kusukela emkhuhlane" kuya kotshwala, lokhu kuzoholela ekutheni bazoba nesifiso esingalawuleki sokuphuza utshwala. Ngakho-ke, kubalulekile kulaba besifazane ukuthi bangaphuzi utshwala, kodwa futhi bangayeki ukuvakashela izindawo lapho zisetshenziselwa khona.
Abanye besifazane abancancisayo kanye nabesifazane bokubeletha baqeda ukuxhomeka kotshwala. Futhi ngaphezu kwakho konke kusiza ukuqonda izihlobo nokusekelwa kwezihlobo. Injabulo yokudla, ingxoxo engokomoya nomyeni, ukumbumbana nomntwana, isiphuzo esiphuzo esiphuzo oludakayo, isitsha esiphundu, ukusikhipha kanye nokugeza okufudumele - lezi zinjabulo ezincane zizosiza lo wesifazane ukuba anqobe ukunxanela kwakhe utshwala. Kulabo omama ababhekene nokudakwa ngokweqile, izingane zinenkinga eminingi lapho zikhulile, zikhula kancane kancane, zibe nesisindo esincane. Kulokhu kungase kube nezinye izizathu ezihambisana nobudlova - ukushiya ingane, ukungabi nobisi oluvela kumama, ukudla okungajwayelekile.
Kukhona ukuvinjelwa okungu-2 kosomama abajwayele ukuphuza okungalawulwayo:
Awukwazi ukondla ingane ngesimo sokudakwa ngokweqile kotshwala. Uma utshwala lenza umama wakho ahlaziye, agule, agwezeleke, khona-ke izimpawu ezifanayo ziyabonakala emntwaneni obelethwe ngebele.
Ngemuva kokuphuza utshwala obuningi noma ezinye izinto ezithokozisayo, zamakhemikhali, ezithandwayo, awukwazi ukuthatha ingane yakho ukuba ilale nawe.
Ingabe ubhiya buyathinta inani lobisi?
Ubhiya alukhulisi ukondla ubisi nganoma iyiphi indlela. Omama abaningi banomuzwa wokuphuka nokuvuthwa kwamagundane lapho kuphuza ubhiya. Kwenzekani ngempela?
Yeka indlela okuzwakalayo okuzwakala ngayo, kodwa ubhiya isikhathi esithile uvalela uketshezi kwezicubu, okuholela ekuvupheni nasekukhuleni kwemithanjeni. Utshwala linciphisa ukuzwela kwe-oxytocin, i-hormone ikhiqizwa kumama abahlengikazi ngenxa yokuncelisa umntwana wengane. Ngenxa yalesi hormone, ubisi oluvela ezicubu zesifuba luyimfihlo. Ngaphandle kwaleli hormone, iningi lebisi alikwazanga ukushiya isifuba. Ochwepheshe baye baphawula ukuthi uma omama bedla ubhiya, izinsana ziphuza isifuba kaningi, futhi ubisi ludla kakhulu. Ngakho-ke, leyo ngxenye yobisi, esele esifubeni futhi ibangele isifuba. Isana esinesifuba esigcwele sithola ubisi oluncane kusuka kumama wakhe.
Ukuncelisa nokuphuza akuhambisani futhi indlela engcono kakhulu yokuthuthukisa i-lactation ukunamathiselwa komntwana njalo esifubeni kwesimo esifanele nesimo sengqondo esihle. Ngakho-ke, labo abangathandi ubhiya, abakwazi ukuziphoqa ukuba baphuze ubhiya futhi baphumule. Futhi uma othile ethanda, khona-ke kudingeka uvume ukuthi uyayiphuza ngenjabulo yakho. Futhi uma uzokuzithokozisa, udinga ukukwenza ngokuphumelelayo ukuze ungakwazi ukulimaza noma othandekayo wakho noma wena.
Indlela yokukhetha ithebula elishintshayo lokushintsha ingane yakho
Indlela yokuzola umntwana okhalayo
I-yoga yezingane kusukela ekuzaleni kuya emavikini ayisishiyagalombili: izivivinyo zokuqala nokusikhipha
Ukudonsa - kuhle noma kubi
Isaladi "Inkukhu yezinkukhu"
Umbala we-pink ekamelweni labantwana
Amaphupho ama-Erotic: ubucwebe obuvusa amadlingozi iPêche Péché
Ama-apula nge-sinamoni ku-microwave
Ungalondoloza kanjani imali kusuka ekunciphiseni ngo-2015?
Granola kusuka izithelo omisiwe
Indlela yokuziphatha ukuze ushade
2 zokupheka of imayonnaise ezinomsoco ekhaya
Ungahamba kanjani ngesikhathi sokukhulelwa?
Indlela yokwakha ubudlelwano obuqinile